ဝါယာရှော့ခ်ဖြစ်ကာ မီးလောင် (25-11-11) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၀ါယာရှော့ခ်ဖြစ်ကာ မီးလောင် (25-11-11)
၀ါယာရှော့ခ်ဖြစ်ကာ မီးလောင် (25-11-11)
Posted by etone on Nov 25, 2011 in News, Opinions & Discussion | 22 comments
မီးလောင်မှု သတင်းတစ်ခု ရထားပါတယ် … ။ အနော်ရထာလမ်းပေါ်က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်အနီးက တိုက်တန်းလျားမှာပါ ။ သိမ်ကြီးဈေးနဲ့ လည်း မျက်စောင်းထိုးလောက် အ နေထား၊ ကုံး တံတား အောက်က တိုက်ပါပဲ … ။ 8လွှာကနေ ၀ါယာရှော့ဖြစ်ပြီး လောင်ကျွမ်းတာလို့ သိရပြီး … ယခုထိတိုင် မီးငြိမ်း သက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ် ။ (အမျိုးတွေ အဆွေတွေရှိရင် ပြေးကြနော် ) … ။ မီးသတ်ကား ခြောက်စီးခန့် ရေပက်ဖျန်းနေသော်လည်း …. မီးလောင်ကျွမ်းဆဲဟုသိရပါတယ် … ။
၀ါယာရှော့နဲ့ ပတ်သတ်လို့ … လမ်းကြုံတုံး မေးခဲ့ဖူးတဲ့ အင်တာဗျူးလေးထဲက (ပို့စ်တင်ပြီးသား )စာသားလေးတွေပါ ပြန်ကူးချလိုက်ပါတယ် … ။ အားလုံးပဲ မီးဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေနော် … ။ မီးကို သတိထား ကိုင်တွယ်ပြီး … မပေ့ါဆမိဖို့လည်း သတိရကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတော့တယ် … ။
(မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဓါတ်ပုံများကို မနက်ဖြန်မှ တင်ပေးပါဦးမယ် … )
သိချင်စိတ်နဲ့ … ” ဒါဆိုလျှင် အိမ်မှာလူမရှိချိန် ၀ါယာရှော့လောင်ကျွမ်းမှူဖြစ်လည်း အရေးယူခံရမှာဆိုတော့ ထောင်ဒဏ်လား ၊ ငွေဒဏ်လား ဘယ်လို သတ်မှတ်သလဲသိပါရစေလို့ ” မေးမိပြန်ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ … ပေါ့ဆမီးလို့ သတ်မှတ်ပြီး အရေးယူမှူတွေ ပြုလုပ်မှာပါတဲ့ … ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာမျိုးရှိသလို ၊ ငွေဒဏ်ချမှတ်တာလည်း ရှိပါတယ် … ထို့အတူ ထောင်ဒဏ်ရော ၊ ငွေဒဏ်ပါ နှစ်ရပ်စလုံးကျခံတာလည်း ရှိပါတယ် … ဆုံးရှုံးမှူ ၊ တန်ဖိုးပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ … ထောင်ဘယ်နှနှစ် ၊ ငွေပမာဏဘက်လောက်လဲဆိုတာကတော့ … မီးသင့်လောင်ကျွမ်းမှူ ပေါ် မူတည်ပါတယ်လို့ ဖြေကြား သွားခဲပါတယ် … ။
အပေါ်ကလင့်မှာတော့ မီးလောင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ … အနည်းငယ်ကို ရေးထားပါသေးတယ် … ။ MRTV-4 TALK SHOW အစီအစဉ်မှ မီးဘေးအန္တရာယ် လေ့လာမိသမျှ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါပဲ .. ။
အခုပဲ ထွက်ကြည့်ပြီး ပြန်ဝင်လာတာ။
မြန်လိုက်တဲ့ etone ပါပဲ။ တော်ပါပေ့။
ငြိမ်းသွားပါပြီ။ မီးငြိမ်းပြီးမှ လှေခါးထောင်ပြီး (အသားယူ) ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြလို့ ကြာသွားတာ။
အော .. ဂလိုလား …အဲ့လို ဒါ့ပုံ ရိုက်နေတာလေးကို ဒါ့ပုံပြန်ရိုက်ထားလိုက်ပါလား ကိုပါလေယာရေ ..ဟီး
ဒီသဒင်းကို နာ့ အမိန့်မရဘဲ ဘယ်တူ ရေးဒါရဲကွ ဟေ ….
ဂျာနယ်လစ်ကြီးရဲ့ညီမ ဂျာကလေးetone ရေးတာပါခင်ည။
ပုံတွေတော့ အကိုဆီက ခိုးရအုံးမှာမို့ မနက်ဖြန်မှတဲ့။ (အိပ်ဆေးတွေ ဝယ်နေလေရဲ့)
ဟား ဟား .. ဟုတ်ဖူး .. ဒီတခါတော့ .. ဦးစိန်သော့ကြီးမှားသွားပြီ … ။
ကျွန်မအစ်ကိုက ဘယ်တော့မှ သူသိတဲ့ သတင်းကို ပြောမပြဘူး … ။ သူ့ဟာသူပဲ ရေးတာ … ။ (အကျင့်ကပုပ်တယ် ) အခုသတင်းပေးတဲ့ လူက အလိမ္မာ အိမ်ပါလေး .. ဟဲဟဲ …
သူ့ခမျာ … ကြိုးစား ပမ်းစား လူတွေကြားတိုးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်နေရင်း ….. ဖုန်းခအကုန်ခံပြီး သတင်းလှမ်းပေးတာ … ..ဟဲဟဲ … ။
သိဘီ သိဘီ ဖြိုးလေး ကိုပြောတာ မဟုတ်လားဟင်
ဟွန့် … နှိုင်းစရာရှားလို့ … ။ ယောကျာ်းအရင့်မာကြီးကို ဂျော်တကီးတဲ့ .. ဟွန့် :mad:
သြော…….သတင်းပေးတာ သူလား ၊ အပြင်မှ ” ၂၀၀ ” ကုန်မှာစိုးလို့ အိမ်အထိတောင် အောင့်လာနိုင်တဲ့သူ။ (တော်ထှာ၊ မကုန်သင့်တာ မကုန်ရအောင်)
သူ့ခမျာ … ကြိုးစား ပမ်းစား လူတွေကြားတိုးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်နေရလို့ အိမ်ထိမအောင့်ထားနိုင်ရင် :mad: တော့ ဒုက္ခ
ဦးစိန်သော့ကြီးနော်…ဟွန့်….. ။
အဲ့ဒီအသုံးမ၀င်တာတွေတော့ အိမ်မသယ်/ပါမလာနဲ့… တွေ့တဲ့နေရာမှာ ၀င်ရှင်းလို့ပြောထားတယ် .. ဟဲဟဲ
နောင်တော် ဂီ့ သူများ ဘဲဘဲ ကို ဂျော်တဂီ့ လို့ ပြောရဘူးလေ။ ဒေါ်တုန်က ဖြေရှင်းချက်ပေးနေပြီ အရင့်မာကြီးပါတဲ့။ ရွာထဲမှာ ညီနောင် ၇ ဖော်လို နုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေ ရှိတာကို ဒေါ်တုန်က အရင့်မာကြီးကို ရွေးတယ်
ဂလိုရှိတယ် ကိုရင်တီ ရ…
ယောက်ျား အရင့်မာ ကြီး ဆိုတဲ့စကားကြီးက ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိ
ယောက်ျား စစ်စစ်ကြီး လို့ပြောလည်း ရတာပဲကို
[ရင့်] ဒါဂျီး နဲ့ [မာ] ဒါကြီး ဂ ..အဟီး ….
၀င်ဂျီးနော် ဘာမှတ်တုန်း. …စလုံးဆန်းဆန်းဒွေ
သုံးလို့ ဆင်ဆာမကျ ဖစ်တွားမယ်
အော် မအိတုန်က ကိုယ်ပိုင် သတင်းထောက်နဲ့ကိုး. ။
လုပ်ပေါ့လေ ရှင်တို့က ရဲကိုး ….
ဟို သတင်း ကြားပြီးပြီလား
လာမပြောနဲ့ အီးဒုံးဆီက သိပြီးသား
အဲဒါပြောတာပေါ့ အသွင်တူ အိမ်သူမဖြစ်ဆိုတာ့
သတင်းပေးတဲ့သူက ပေး ရေးတဲ့သူကရေး… ကဲဘယ်လောက်များ အတိုင်အဖောက်ညီသလဲ…
ဟေဟေ့ အလိမ်မာအိမ်ပါလေးဆိုတော့ အိမ်ခေါ်ထားချင်လိုက်တာ အဟိ
ဟိတ်ကောင်လေး … အိမ်ခေါ်ထားချင်တယ်ဟုတ်လား … ။ ဘုရား ဘုရား … ။
လူကြည့်တော့ … တည်တည်တံ့တံ့ယောကျာ်း ပီပီသသပါ … ဘယ်တုန်းက … ဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်… ။ ဘင်္ဂလား မမနဲ့တွေ့မှပဲ မေးကြည့်ရတော့မယ် .. ဟဲဟဲ
စောစောက နေ့လည် ၁၂နာရီ ၀န်းကျင်လောက်တုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ရှေ့တော့ ရောက်သား မီးသတ်ကားက ဘာလို့ ဈေးသစ်ရှေ့က မီးသတ်ပိုက်ကနေ ရေဖြည့်နေတာလဲလို့ တွေးနေတာ.. မီးလောင်လို့ ရေဖြည့်တယ်လို့ မတွေးမိလိုက်ဘူး။
အဲဒီ မီးလောင်တဲ့ နေရာမှာ
ပေါက်ဖော် တစ်ယောက် ရောက်နေတာ မမြင်မိဘူးလားလို့ 
တကယ်မရေးလောက်ဖူးထင်လို့ပွားလိုက်တာပါ ။ တကယ်ရေးတာပဲ ။
သတင်း တစ်ခု သ်ိရပြီ။
“ရင့်”တာကြီးနဲ့ “မာ”တာကြီး ကိုတွေးမိပြီးပြောပါတယ်……..
ဒါ့ပုံက ခုမှပဲ အက်ဒစ်လုပ်ပြီး တင်လို့ရတော့ဒယ် .. ဟီး
လှေကားကြီးက အမြင့်ကြီးပါလား။ ခုခေတ်ကောင်မလေးတွေ စကတ်တိုတို ဝတ်တာများတယ်နော်။ အဲဒီလှေကားကြီးနဲ့ ဆို ဒုက္ခ